भिन्डी खाने ९९ प्रतिशत मानिसले जहिल्यै यी २ गल्ती गर्छन् जसले देखिनसक्छ यस्ता घा-तक समस्या ! « गोर्खाली खबर डटकम
भिन्डी खाने ९९ प्रतिशत मानिसले जहिल्यै यी २ गल्ती गर्छन् जसले देखिनसक्छ यस्ता समस्या ! हरेक तरकारीको आफ्नो मौसम हुने गर्छ । मौसमी तरकारी अन्य तरकारीको तुलनामा निकै फाइदाजनक हुने गर्छ त्यसैले डाक्टरले पनि निकै तरकारी खान सल्लाह दिने गर्छन् ।
सामान्यतया मौसमी तरकारी निकै खान आवश्य हुन्छ किनकि त्यसले शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । तरकारी खाँदा हाम्रो दिमाग पनि तेज हुने गर्छ । भिण्डी बच्चादेखि बुढासम्मका लागि मन पर्ने तरकारी हाे । भिण्डीका विभिन्न परिकार बनाएर खाने गरिन्छ तर हामीले भिण्डी खाँदा यी दुई गल्ती गर्ने गछौँ । जसका कारण विभिन्न समस्या देखिने गर्छ जुन यश प्रकार छन्:-
१) भिण्डीसँग मुला:- भिण्डी खाएपछि मुलाको सेवन गर्नु पनि निकै घा-तक मानिन्छ । मुला र भिण्डीको सेवन एकसाथ गर्दा छालामा विभिन्न समस्या देखिने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
भिण्डी र मुला एकसाथ खाँदा अनुहारमा दाग धब्बाको सम्भावना हुने गर्छ । तपाईले करेला र मुला एकसाथ खाँदा तपाईको अनुहार पूरै तरिकाले खराब हुने सम्भावना हुन्छ त्यसैले कहिलै पनि मुला र करेला सँगै खाने गल्ती नगर्नुहोस् ।
२) भिण्डी खाएपछि करेला:- कयौँ व्यक्तिले भिण्डीसँग विभिन्न तरकारीको सेवन गर्ने गर्छन् जुन मौसममा भिण्डी हुने गर्छ, त्यो मौसममा करेला पनि हुने गर्छ । धेरै मानिसले भिण्डीसँगै करेला पनि मिसाएर सेवन गर्ने गर्छन् तर यसो गर्नु निकै गलत मानिन्छ ।
भिण्डीसँगै करेला वा करेना खानु अघि वा पछि भिण्डीको सेवन गर्नु वि- ष सरह हुने गर्छ । यसले शरीरमा वि- ष फैलाउने भएका कारण मानिसको मृ- त्यु पनि हुनसक्छ । त्यसैले तपाईले भिण्डीसँग करेला भूलेर पनि खान हुँदैन् ।
यो कलेजको अचम्मको नियम भर्ना हुन ब्वायफ्रेन्ड अनिवार्य चाहिने